मनोरंजन – Page5– " कञ्चनजंगा News "
टाइगर श्राफको ‘बागी ३’ को दिशा पटानीको इन्ट्री
मुम्बई – बलिउड अभिनेत्री दिशा पटानीलाई फेरि एकपटक टाइगर श्राफको हिट फ्रेन्चाइज ‘बागी’ को तेस्रो सिक्वेलमा देख्न पाइने भएको छ । फिल्म ‘बागी ३’ मा दिशा पटानीको इन्ट्री भएको छ । …
मुम्बई – बलिउड अभिनेत्री दिशा पटानीलाई फेरि एकपटक टाइगर श्राफको हिट फ्रेन्चाइज ‘बागी’ को तेस्रो सिक्वेलमा देख्न पाइने भएको छ । फिल्म ‘बागी ३’ मा दिशा पटानीको इन्ट्री भएको छ ।
यद्यपि दिशालाई यसपटक फिल्ममा शीर्ष भूमिका नभएर एक गीतमा मात्र देख्न पाइनेछ । ‘बागी ३’ मा टाइगरको अपोजिटमा श्रद्धा कपूरलाई देखिनेछ ।दिशाले छिट्टै नै गीतको छायांकन थाल्नेछिन् । तर, गीतमा दिशाले टाइगरसँगै नाच्नेछिन् या छैनिन् भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन ।
जब पाँडेले भने – यो त नेपाली अवार्डको कार्यक्रम जस्तो भयो…
बिहीवार राजधानीमा फिल्म ‘सेन्टीभाइरस’ को गीत सार्वजनिका कार्यक्रम थियो । कार्यक्रममा निर्देशक रामबाबु गुरुङसहित क्रु मेम्बर उपस्थित थियो ।कार्यक्रममा हास्य टेलिश्रृङ्खला ‘सक्किगोनि’ का कलाकारको पनि उपस्थिति थियो । ‘सक्किगोनि’ कुमार कट्टेल, दीपक आचार्य, अर्जुन घिमिरे (पाडे) लगायत कार्यक्रममा मुख्य आकर्षण बनेका थिए ।
कार्यक्रमको उद्घोषण गरिरहेका राजा राजेन्द्रले प्रायः कलाकारलाई स्टेजमा बोलाइरहेका थिए । निर्माण टिमका तर्फबाट निर्देशक रामबाबु गुरुङ, नृत्य निर्देशक शंकर बिसी, अभिनेता दयाहाङ राई, निर्मात्री कुञ्जना घिमिरे, निर्माताद्वय डिन्डु लामा ह्योल्मो र फुर्पा ह्योल्मो लगायत उपस्थित थिए ।
कार्यक्रममा दीपाश्री निरौला, सुरवीर पण्डित, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, अशोक शर्मा, रमेश उप्रेती लगायत समेत उपस्थित थिए । प्रस्तोताले केही कलाकारलाई अगाडि बोलाइरहेका थिए । दीपाश्री निरौला पनि अगाडि पुगिन् । ‘सेन्टीभाइरस’ का लेखक कुमार कट्टेलले कार्यक्रममा आएका अर्जुन घिमिरे (पाँडे) लाई पनि अगाडि बोलाउन प्रस्तोतासँग खासखुस गरे ।
तर, जिस्किएर प्रस्तोता राजा राजेन्द्रले भने – उहाँहरुले त अघिदेखि मलाई पाँडेलाई पनि अगाडि बोलाउन भन्नुभएको छ तर म बोलाउँदिन । मन लागे आफै आए हुन्छ । प्रस्तोताले पाँडेकै आवाज निकालेर अगाडि बोलाउन आग्रह गर्दा अर्जुन घिमिरेले पनि जवाफ फर्काए ।
उनले भने, ‘यता सुन्, यो त नेपालको अवार्ड कार्यक्रमजस्तो भयो, यता थोरै उता धेरै म आउँदिन ।’ उनले यसो भनेपछि हलभरि हाँसो फैलिएको थियो । हलको सिटमा बसेका उनी अगाडि गएनन् । तर हलमा सबैलाई हँसाए ।
हुन पनि नेपालमा पछिल्लो समय अवार्ड समारोहमा दर्शक नै नहुने समस्या छ । हालै जापानमा सम्पन्न भएको सूर्य इन्टरनेशनल अवार्डमा दर्शक नहुँदा कार्यक्रमकै बेइज्जत भएको थियो ।
यो मात्र होइन, नेपालमै हुने अवार्ड कार्यक्रममा पनि दर्शकको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । किनकि, यहाँ अवार्ड ‘सेटिङ’ मा दिने गरिन्छ भन्ने आरोप आयोजकलाई लाग्ने गरेको छ ।
ट्रेलरमा यस्तो देखियो निर्मला पन्त कथामा आधारित फिल्म ‘कोपिला’ (भिडियो सहित)
कञ्चनपुर भीमदत्तनगरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको ब ला त्का र पछि ह त्या भएको विषयलाई लिएर बनाइएको नेपाली चलचित्र ‘कोपिला’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार ओएसआर डिजिटलले आफ्नो अफिसियल युट्युब …
कञ्चनपुर भीमदत्तनगरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको ब ला त्का र पछि ह त्या भएको विषयलाई लिएर बनाइएको नेपाली चलचित्र ‘कोपिला’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार ओएसआर डिजिटलले आफ्नो अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो।
चलचित्रको ट्रेलरमा निर्मलालाई कोपिला पात्र बनाइएको छ। ट्रेलरमा पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, राजनीतिक पार्टीले विभिन्न बहानामा कोपिलाको लासमाथि गरेको राजनीतिलाई देखाइएको छ।
चलचित्रको लेखन तथा निर्देशन शिवम् अधिकारीले गरेका हुन्। चलचित्रमा सरिता गिरी, गणेश गिरी र रिद्धि चरण श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको छ। चलचित्र मणिराज गौतमले निर्माण गरेका हुन्।
चलचित्रले रिलिज मिति भने तोकेको छैन।
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ट्वीटर, इन्ष्टाग्राममा केहि कुरा पोस्ट गरेको क्षणभर मै भाइरल हुने गर्दछ । यसले कसलाई कति बेला सेलिब्रेटी बनाउँने हो कुनै पत्तो छैन । यस्तै एक युवतीको …
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको पेटमा बच्चा, यसरी खुल्यो रहस्य
मुम्बई । चर्चित बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार गर्भवती भएका छन् । उनको नयाँ फिल्म ‘गुड न्यूज’हो । यस फिल्ममा करीना कपूर खान, कियारा आडवाणी र दिलजीत दोसांझ पनि देखिन्छन् । फिल्मको …
मुम्बई । चर्चित बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार गर्भवती भएका छन् । उनको नयाँ फिल्म ‘गुड न्यूज’हो । यस फिल्ममा करीना कपूर खान, कियारा आडवाणी र दिलजीत दोसांझ पनि देखिन्छन् । फिल्मको प्रमोशन तिव्र गतीका साथ जारी छ । यसै बीच, फिल्मका निर्माताहरू धर्म प्रोडक्शनले एक भिडियो जारी गरेको छ । यस भिडियोमा अक्षय कुमार र दिलजीत दोसांझलाई पैसव पीडा महसुस गर्न टेस्ट हुँदै देखाईएको छ।
वास्तवमा, एक उपकरण कृत्रिम श्रम कलमको लागि प्रयोग गरिन्छ, जसले प्रसवको समयमा उही दुखाइ महसुस गर्दछ । भिडियोमा देखिएको छ कि पीडाको तीव्रता बढ्दै गएपछि अक्षय र दिलजित असह्य पीडा भोग्छन् र दुबै चिच्याउँछन् ।
अक्षय र दिलजितले अनुभव साझा गरेका छन् । यो परिक्षण पछि अक्षय र दिलजीतले भने,‘बच्चा जन्माउन धेरै गाह्रो छ । हामीलाई डाक्टरले भनेका थिए कि तपाईले धेरै चोटि पीडा भोग्नुपर्यो, वास्तवमा महिलाले बच्चालाई जन्म दिनु पर्ने भन्दा बढी हो । हामी विश्वका सबै महिलालाई सम्मान गर्दछौं जसले यस पीडा सहन्छन्।’
बच्चाको जन्ममा ‘शुभ समाचार’स् फिल्ममा अक्षय र करीनाले एक जोडीको भूमिका खेल्दैछन् जसले आईभीएफ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर अभिभावक बन्छन् । कथाको मोड़ तब आउँछ जब विर्य अर्को जोडीसँग उहि उपनामको कारण आदानप्रदान हुन्छ । दिलजीत दोसांझ र कियारा आडवाणी एकै जोडी खेल्छन् ।
यो फिल्म डिसेम्बर २७ मा रिलीज हुनेछ । करण जौहरको धर्म प्रोडक्शनको ब्यानरमा राज मेहता निर्देशकको रुपमा डेब्यू गर्दैछन् । हेरू जोहर, अरुणा भाटिया, करण जोहर, अपूर्व मेहता र शशांक खेतानले निर्मित फिल्म २७ डिसेम्बरमा रिलीज हुनेछ ।
यी मोडलको फिगर देखेर चकित पर्छन् सबै ! (फोटो सहित)
एजेन्सी। सामाजिक संजालमा आजभोलि सुन्दर युवतीका तस्वीरहरु भाइरल हुने गर्छन् । यस्तै एक सुन्दरीका तस्वीरले अहिले इन्टरनेटमा तहल्का मच्चाइरहेका छन् । उनको सुन्दरता देखेर मानिसहरु मोहित भइरहेका छन् । यी सुन्दर …
एजेन्सी। सामाजिक संजालमा आजभोलि सुन्दर युवतीका तस्वीरहरु भाइरल हुने गर्छन् । यस्तै एक सुन्दरीका तस्वीरले अहिले इन्टरनेटमा तहल्का मच्चाइरहेका छन् । उनको सुन्दरता देखेर मानिसहरु मोहित भइरहेका छन् । यी सुन्दर युवतीको नाम हो ग्रेसिएला मोन्टेस ।
चर्चित नेपाली नायिका निरुता सिंह भारतीय गायन रियालिटी शो ‘इन्डियन आइडल’मा हेर्नुहोस (फोटो फिचर सहित)
काठमाडौँ । एक समयकी चर्चित नेपाली नायिका निरुता सिंह भारतीय गायन रियालिटी शो ‘इन्डियन आइडल’मा पुगेकी छिन् । उनले आफू इन्डियन आइडलमा गएको कुरा इन्डियन आइडलको सेटमा खिचेकी तस्बिर तथा भिडियो …
काठमाडौँ । एक समयकी चर्चित नेपाली नायिका निरुता सिंह भारतीय गायन रियालिटी शो ‘इन्डियन आइडल’मा पुगेकी छिन् । उनले आफू इन्डियन आइडलमा गएको कुरा इन्डियन आइडलको सेटमा खिचेकी तस्बिर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
उनले उक्त फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्राममा शेयर गर्दै लेखेकी छिन् । “इन्डियन आइडलको सेटमा राम्रो समय बिताए । आदित्य नारायणलाई धेरै धेरै धन्यवाद ”
हाल मुम्बई बस्दै आएकी निरुताले इन्डियन आइडलको सेटमा एक नेपाली नायिकाको हैसियतले पुगेकी हुन् । नायिका निरुताद्वारा अभिनित दर्पण छायाँ, माइती, अजम्बरी नाता, ठूल्दाई, रहर, सिउँदोको सिन्दुर, चाँदनी जस्ता चलचित्र निकै हिट रहेका छन् ।
जीवनकै पहिलो पटक केक काटेर कमला घिमिरेले जन्मदिन मनाईन, ‘अमृत दाईलाई किन नबोलाको’ भन्ने प्रश्नमा कमलाले फर्काइन् यस्तो जवाफ (भिडियो हेर्नुस) काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सन्जालमा सर्वाधिक भाईरल भएकी बाल …
काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सन्जालमा सर्वाधिक भाईरल भएकी बाल प्रतिभा हुन्, कमला घिमिरे । धादिँगकी कमला घिमिरेले ११ बर्षकै उमेरमा गाउँको एक कार्यक्रममा लाईभ दोहोरी गाएपछि उनको भिडियो गाउँकै एक मिडियाकर्मी समेत रहेका अमृत सापकोटाले फेसबुकमा हालेपछि उनको कलालाई सबैले शेयर गरे । पछि युटुब च्यानलहरु पनि उनको घरमै पुग्न थालेपछि कमला भाईरल बनिन् ।
यसैबिच कमला १२ बर्षकी भएकी छिन् र जीवनकै पहिलो पटक उनले केक काटेर आफ्नो जन्मदिन मनाएकी छिन् । इतिहासकै पहिलो पटक उनले र राजु परियारले गाएको लाईभ दोहोरीले १ करोड भ्युज पनि पायो । भिडियो यो समाचार पछि हेर्नुस
धुर्मुस-सुन्तलीको ‘सेन्टी भाइरस’ घोषणा, नाफाको २० प्रतिशत सामाजिक कार्यमा (भिडियो सहित)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – धुर्मुस-सुन्तलीको निर्माण रहने सिनेमा ‘सेन्टी भाइरस’ औपचारिक घोषणा गरिएको छ । रामबाबु गुरुङले निर्देशन गर्ने सिनेमाको वर्किङ टाइटल ‘एन्टी भाइरस’ थियो ।लामो समय टिमको छलफल पछि …
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – धुर्मुस-सुन्तलीको निर्माण रहने सिनेमा ‘सेन्टी भाइरस’ औपचारिक घोषणा गरिएको छ । रामबाबु गुरुङले निर्देशन गर्ने सिनेमाको वर्किङ टाइटल ‘एन्टी भाइरस’ थियो ।लामो समय टिमको छलफल पछि सामाजिक व्यंग्य रहने सिनेमाको शिर्षक ‘सेन्टी भाइरस’ जुराइएको छ । ३५ दिनको सेड्युल लिएर भदौ ३ देखि छायाँकन उत्रिने सिनेमामा सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)सँगै दयाहाङ राई, विल्सनविक्रम राई, बुद्दि तामाङ, कमलमणि नेपाल, राजाराम पौडेल, सूर्यमाला खनाल, बसन्त भट्ट, दीपक आचार्यलगायतको अभिनय रहनेछ ।
सुबिहानी फिल्मस प्रालिको व्यानरमा निर्माण हुने सिनेमामा डिन्डु लामा ह्योल्मोको लगानी रहनेछ । सह-निर्मातामा डिन्डुका भाई फुर्पा लामा रहेका छन् । धुर्मुस-सुन्तलीले छोरी सुबिहानीको नामबाट व्यानर दर्ता गरेका छन् ।कुमार कट्टेल र दीपक आचार्यको लेखनमा निर्माण हुने सिनेमामा राजनराज सिवाकोटी/कालीप्रसाद बाँस्कोटाको संगीत, शैलेन्द्र ध्वज कार्कीको छायाँकन, निमेष श्रेष्ठको सम्पादन र रोहित शाक्यको पार्श्वसंगीत रहनेछ ।
सामाजिक कथाबस्तुमा निर्माण हुने सिनेमाको मुनाफाको २० प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा सहयोग गरिने कलाकार सिताराम कट्टेलले जानकारी दिए । ‘हामीले सिनेमा निर्माण गर्ने खबर बाहिएरसँगै सामाजिक संजालमा लगानीको बारेमा धेरै टिका-टिप्पणी सुनेका थियौँ । विशेषत: सिनेमामा अमेरिकामा बस्दै आउनु भएका डिन्डु लामा ह्योल्मो र फुर्पा लामाले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ हामिसँग सिनेमामा सहकार्य गर्न करिब २ देखि नै प्रतिक्षारत हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले हामीले सम्झौतामै २० प्रतिशत मुनाफा सामाजिक कार्यमा खर्चिने हस्ताक्षर गरेका थियौँ ।’धुर्मुसले अगाडी थपे ‘सामाजिक कार्य अन्तर्गत १५ प्रतिशत रकम गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई सहयोग गर्नेछौँ । भने, बाँकी ५ प्रतिशत कलाकार संघको भवन निर्माणमा सहयोग हुनेछ ।’
भवन निर्माणको जिम्वेवारी पाउन धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले अपिल गरेको समेत उनले बताए । ‘उहाँहरुले हामिलाई भवन निर्माणको जिम्वेवारी दिनुभयो भने ठिकै छ । भएन भने पनि हामि मुनाफाको ५ प्रतिशत हस्तान्तरण गर्नेछौँ ।’ धुर्मुसले जानकारी गराए ।करिब ५ वर्ष पछि दर्शकको चाहना बमोजिम हामी कलाकारिता माध्यमबाट दर्शक माँझ पुग्दैछौँ । पूर्णत मनोरंजनको प्याकेज ल्याएर उपस्थित हुनेछौँ ।’ कलाकार कुञ्जनाले बताइन । कास्कीको रुपाकोटमा खिचिने सिनेमाको मुख्य सहायक निर्देशकमा तारानाथ न्यौपाने र सिजन दाहाल छन् । भने, कला निर्देशकमा मधुसुधन कार्की छन् ।
मिथिला शर्मा र सुरक्षा पन्त अभिनित फिल्म ‘आमा’को मार्मिक ट्रेलर सार्वजनिक, ट्रेलरले रुवायो दर्शकलाई (ट्रेलरसहित)
काठमाडौं, ३ पुस । मिथिला शर्मा र सुरक्षा पन्तद्वारा अभिनित नेपाली कथानक चलचित्र ‘आमा’को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा मध्यम वर्गीय परिवारको सदस्य विरामी भएपछिको अवस्था देखाईएको छ …
काठमाडौं, ३ पुस । मिथिला शर्मा र सुरक्षा पन्तद्वारा अभिनित नेपाली कथानक चलचित्र ‘आमा’को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा मध्यम वर्गीय परिवारको सदस्य विरामी भएपछिको अवस्था देखाईएको छ ।
निर्देशक दीपेन्द्र के. खनालले निर्देशन गरेको फिल्मको ट्रेलर अत्यन्तै कारुणि बनेको छ । ट्रेलरका दृश्यले दर्शकको मन छुन्छ । ट्रेलर हेर्दा दर्शक चलचित्र हेर्नका लागि हलसम्म सजिलै आउने अनुमान लगाइएको छ ।
मिथिलाको अभिनय मार्मीक लाग्छ । अभिनेत्री सुरक्षाले कपाल मुन्डन गराएको दृश्यले दर्शकको मन छुन्छ।कोठा भाडामा लिएर बस्ने मध्यम वर्गीय परिवारको कथामा चलचित्र निर्माण गरिएको हो ।
डि।एस।डिजिटलको प्रस्तुतीमा शर्मिला पाण्डेको लगानी रहेको चलचित्र आउँदो फागुन ९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
ट्रेलर हेरौं –
काठमाडौं।नेपालकी चर्चित अभिनेत्री हुन्- निरुता सिंह । उनी पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेकी छिन् किन भने ‘इन्डियन आइडल’ रियालिटी शोमा पुगेकी छिन् । शोका होस्ट आदित्य नारायणको तर्फबाट उनी ‘इन्डियन आइडल’ …
आफु लामो समय देखि मुम्बई बस्दै आए पनि ‘इन्डियन आइडल’ रियालिटी शोमा आउने इक्षा थियो तो आज आदित्यलाई धन्यवाद भनेकी छिन् ।
नेपाली नायिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै इन्डियन आइडलमा पुगेकी उनले इन्डियन आइडलको सेटको भिडियो तथा फोटो आफ्नो सामाजिक सञ्जाल अर्थात फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेकी छिन् ।
एपी वान टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने सिंङ्गिङ रियालिटी सो ‘नेपाल आइडल’ सिजन–३ आजदेखि सुरू हुँदैछ । अडिसन राउन्डका सबै श्रृंखला छायांकन गरिसकेको आयोजकले आजबाट प्रशारण सुरू गर्न लागेको हो ।
कार्यक्रम राति ८ः३० बजे प्रशारण हुने छ । यसअघि ‘नेपाल आइडल’ सिजन–१ मा बुद्ध लामा र दोस्रो सिजनमा रवी ओड विजयी बनेका थिए।